अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नं. १३ देउराली स्थित बुद्ध आधारभूत विद्यालय शिक्षक नियुक्ति प्रकरणमा नयाँ खुलासा भएको छ । वैखरी अनलाईनले भदौ १२ गते वडा नं. १३ का वडा अध्यक्ष दुर्गा बिसीले आफ्नी श्रीमती संगिता विसी चुँदालीलाई सूचना लुकाएर राहत शिक्षकमा नियुक्त गरेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
लगत्तै वडा अध्यक्ष विसी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रअ बाबुराम भुसाललाई व्यापक दबाव आयो । दबाव पछि उनीहरुले आफूले गरेको अवैध नियुक्तिलाई ढाकछोप गर्न विभिन्न किर्ते प्रमाणहरु खडा गरे जुन एक पछि एक वैखरी अनलाईनलाई विभिन्न श्रोतबाट प्राप्त भयो ।
किर्ते प्रमाण खडा गर्न पत्रकारदेखि लिएर रेडियो संचालक र विद्यालयका प्रअ शिक्षक र वडा अध्यक्ष र उनका परिवार समेत संलग्न भए ।
वैखरी अनलाईनमा सूचना विना शिक्षक नियुक्त भएको समाचार पछि वडा अध्यक्षले आफू नजिकका पत्रकारसंग मिलेर नक्कली पत्रिका खडा गरेका छन् । लुम्बिनी दर्पण साप्ताहिकले भदौ १२ गते भेटेर पछिल्लो मितिको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नका लागि ३५ हजार रकम दिए । साउन २५ गते नै पत्रिका प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा सोही वर्ष ४ अंक ४ साउन २५ कै मितिमा अर्को नक्कली पत्रिका खडा गरेर भदौ १६ गते बुटवलको एउटा प्रेसमा ५ प्रति पत्रिका छापेर विद्यालय तथा वडा अध्यक्षलाई बुझाए तर प्रेस काउन्सिललाई साउन २५ गते नै बुझाएको बर्ष ४ अंक ४ को पेज ६ को पत्रिकामा भने बुद्ध आधारभूत विद्यालयको सूचना छैन । पेज नं. ६ को सो स्थानामा मायादेवी गाउँपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिकाको सार्वजनिक सूचना राखिएको छ । प्रेस काउन्सिलका अधिकृत रामशरण बोहराले लुम्बिनी दर्पण साप्ताहिकको अंक ४ पेज ६ मा कुनै पनि विद्यालयको सूचना प्रकाशन नभएको जानकारी दिनुभयो । किर्ते गरेको ठहर भए पत्रिकालाई किर्ते जालशाजी तथा पत्रकार आचारसंहिता अनुसार कारवाही हुने बताउनुभयो । हालै विद्यालयले समाचार खण्डनमा पनि लुम्बिनी दर्पण पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भएको र वडा अध्यक्ष बिसीले पनि एक स्थानीय अनलाईन टिभीलाई सोही पत्रिकामै सूचना छापिएको बयान दिएका छन् ।
एक मात्र उम्मेद्वार र उनैलाई विना प्रतिस्प्रधा शिक्षक नियुक्त गरेको समाचार लगत्तै विद्यालयले भदौ १२ गते नयाँ आवेदक खडा गर्यो । हतार हतारमा वडा अध्यक्षले काठमाण्डौ बस्ने आफ्नी साली निर्मला चुदाँली र उनकी साथी विमला केसी र आफ्ना नजिकका नेकपाकै कार्यकर्ता ऋषिराम घिमिरेका कागजात मगाए र आवेदक बनाए । विद्यालय श्रोतकै दाबी मान्ने हो भने तीनै जनाका आवेदन समेत त्यहि लेखिएको र उनीहरुको हस्ताक्षर समेत नक्कली हो । रोजगारीको हाहाकार र त्यसमाथि आधारभूत विद्यालय र शिक्षक आवश्यक पर्ने विषय नेपाली । लकडाउन र बेरोजगारी झांगिएको बेला कस्ले जाँगिर नखाला ? शितगंगा नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै ३ सय बढि प्रावि, निमावी तथा मावि तहका शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिहरु छन् तर तिनीहरुलाई थाहा नभएको सूचना वडा अध्यक्षका श्रीमती, साली, आफन्त र कार्यकर्ता गरि ४ जनालाई मात्र थाहा हुनु र ती मध्ये ३ जना परीक्षामै नआउनु आफैमा किर्ते उम्मेद्वार खडा गरेको बलियो प्रमाण हो ।
सुचना लुकाएको आरोपको समाचार आइपुग्दा सम्म वडा अध्यक्ष दुर्गा विसीको योजनामै श्रीमती संगिता विसी चुदाँलीले भदौ १० गते हता हतार नियुक्ती बुझिसकेकी थिइन् । समाचार पछि किर्ते प्रमाण जुटाउने क्रममा रेडियो शितगंगामा सूचना बजेको भन्दै बिल प्रमाण देखाइयो । रेडियो अध्यक्ष नारायण शर्माले फेसबुके विज्ञप्ती जारी गर्दै १ हप्ता सम्म सूचना बजेको दाबी गरे तर वडा अध्यक्ष विसीले भने सूचना रेडियोबाट १५ दिन बजेको दाबी गर्दै अन्तर्वार्ता दिए । रेडियो कर्मचारीको श्रोत अनुसार भदौ ११ गते मात्र सूचना बनाइएको थियो भने २ दिन मात्र बजाइएको थियो ।
शितगंगा १३ स्थित बुद्ध आधारभूत विद्यालयले शिक्षक भर्ना प्रक्रिया नै गलत भएको प्रमाण फेला परेको छ । जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इर्काइ अर्घाखाँचीले जारी गरेको निर्देशिकामा राहत, अस्थायी, निजी शिक्षक भर्नामा कम्तिमा ३ जनाले आवेदन दिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । जस मध्ये अनिवार्य ३ जना परिक्षामा बस्नुपर्ने छ । आवेदन दिएका मध्ये कुनै अयोग्य भएमा आवेदन लिन पाइने छैन । तर अयोग्य देखिए पुनः ७ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र त्यसमा पनि थप आवेदन नपरेमा सदर भएको सबै आवेदकहरुलाई अनिवार्य परीक्षामा सामेल गराउनुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षा तथा समन्वय इकाई अर्घाखाँचीले शितगंगा नगरपालिका शिक्षा इकाई संग थप घटना बारे बुझ्ने जनाएको छ ।
न पक्षको न विपक्षको यात्रा निष्पक्षको जारी छ ।